Ngamnye wethu unento ebalulekileyo ebomini, kunye neminqweno, amaphupha, izicwangciso. Ngokuqinisekileyo, sonke siphupha uthando lokwenene, kodwa ekuqaleni, abaninzi abantu abakucingi ngako, kodwa malunga nekhondo kunye nosapho, ubuncwane, udumo ... Zonke ezi zinto zibonakala zizisa ulonwabo kwaye zikhokelela ekuwaneliseni iminqweno esinayo emininzi iminyaka. ... Kodwa xa kufika imali, ubutyebi nozuko kubonakala - wonke umntu uyaqaphela ukuba ukungabi nalutho nokudabuka kuza, kusekho into ekhoyo, kwaye siqala ukuqaphela ukuba akukho, oku akusikho nto esiyifunayo. Wonke umntu uhlala efuna uthando, siyayifuna njengomoya. Ukongezelela, sifuna uthando lokwenene kunye nokunyaniseka, njengokuba siziva kuyo yonke indawo, kumabali nakwiindalana, sibona kwiifilimu kwaye sibona kubantu. Sisoloko simkhangela, kunye nezinye iimpawu zakhe. Sithemba, kholwa kwaye ufunde. Uthando aluyena nje umvakalelo ovela kuyo nayiphi na indawo, kwaye ngokukhawuleza siyithatha njengesipho kwaye siyonwabele. Enyanisweni, bubungcali obufuneka ukuba bufunde, buqondwe. Kukho umbuzo owodwa kuphela: indlela yokukwazi ngayo, oku? Ukwahlula njani uthando olunye? Ukuze uhambe apha, khankanya iimpawu ezi-5 zothando oluyinyaniso oluya kumnceda ukuba afumane kwaye aluqonde, kunye nokufumanisa xa udibana naye.
Impawu zokuqala zintlanu zothando zithandwa, ngokubanzi. Umtsalane xa ungakhange ufanane nomntu kunye nokubonakala kwakhe, awuyikuziva nje kwaye uyaqonda ukuba uyamthanda kwaye uyamhle. Apha akwanele ukuwufuna. Uphawu lokukhanga lubonisa umdla kumphefumlo womntu, umlingiswa wakhe. Uthando luyimeko xa imiphefumlo emibini iphinda ihlangane, umntu omnye unomdla kwelinye kwaye ufumana ukuthanda kwakhe okuthile. Kuyinto efokelwayo ukupenda ezininzi iinkalo ezincinci, kodwa ingcamango ephambili isala ukuba uziva uvelwano kunye nomtsalane komnye umntu. Uthando luquka izinto ezintathu zokukhanga okanye inzala. Xa uthanda umntu, uthanda indlela abukeka ngayo, umphefumlo wakhe kunye nalapho ahamba khona, zeziphi izicwangciso zakhe kunye nento aphuphayo ngayo. Ukuba ubuncinane enye yezinto ezilahlekileyo - akuyena indoda yakho kwaye ayikho uthando lokwenene.
Uphawu lwesibini lenye indlela yokucinga. Ukuba uziva ukuba uqale ukucinga nje ngokuzikhethela wena ngokwahlukeneyo, kodwa malunga nawe babini kunye, ukuba lo mntu uhlale ehlala kwiingcamango zakho. Ufuna ukumthemba, usondele, uqala ukucinga ngendlela eyahlukileyo kunye nazo zonke utshintsho ezenzeka kuwe, uthinte umntu othandekayo. Ukuba kunjalo, unokucinga ukuba into yesibini iya kwenziwa. Kwakhona kuthetha ukuba utshintshe ngokwakho, njengengcinga yakho, uqala ukuziva uhlukile, ufuna ukutshintsha, into enokuyenza, ukwenza, unomnqweno. Uziva wena kunye nalo lonke, uba ngumntu ohlukileyo naye.
Inxalenye yesithathu yemimiselo yothando lwenene yintuthuzelo engokomoya. Umthandayo akanakuze akwenze uzive ungazi, ngenxa yakhe awunakuqala ukulahlekelwa yintlonelo. Uthando lokwenene aluyi kukubandezeleka, ufune rhoqo kwaye uphendule iingxaki, zama ukuba ngumnye ngenxa yomntu omthandayo. Ukuba kunye nomntu omthandayo ungaziva ukhululekile ngokomoya, akanelisekanga ngokwakho, okanye akakuboni njengokuba unjalo, akuyena mntu ofuna. Nawuphi na umntu, ufuna ukuhlala, utyumle, uqala ukuzithandayo kunye nobomi obujikelezayo, kwaye uyakunxusa. Ukuba uziva uhlukile okanye ungayimfuneko kuye, uloyiko lokungabi nxamnye okanye ungayiqondi kwaye uqaphele ukuba akafuni ukukuqonda - oku akusilo uthando lokwenene. Akaze akwenze uhlupheke.
Uphawu lwesithathu luvisisana. Ukungqinelana, ngaphezu komphefumlo wonke, ukuvisisana kwabalinganiswa. Inyaniso yokuba iintshaba zithandwa ngokwenene kuphela ekuqaleni kwencwadana, xa u-spark, uthando, umdla ovela phakathi kwakho. Ewe, ngamanye amaxesha izichaso zithandwa ngumlinganiselo wenzalo kumntu ongenakho ngathi. Kodwa xa kufika ixesha lokuhlala kunye, yenza izicwangciso, uzazi kakuhle, zonke ezi zichasene nezicwangciso ziqala ukuzibonakalisa ngokwabo, kwaye izichaso ezifanayo ziqala ukugxeka ngokuphindwe kabini amandla abatsalayo. Uthando lokwenene lithetha ukuba abantu bafanele badibanise into efanayo, bafanele babe neempawu zobunxibelelwano, izicwangciso ezingayi kuphazamisana. Ulungelelwano lufanele lube nolwalamano, intloko nentliziyo, ngaphandle koko ulwalamano luya kulahleka.
Uphawu lwesine luyathemba. Enyanisweni, oku akuyona enye yale mibhalo, ibonakala ngokubonakalayo esiyiva rhoqo. Ukuthembela kubaluleke kakhulu ubudlelwane, kwaye kaninzi sithintela okanye singabonakali ngokupheleleyo. Umntu omthandayo ngumntu wokuqala othembela kuye, onokubuyisela kuye. Akufanele ufihle okanye ufihle nto, ungesabi ukuxelela okanye ukuthemba. Ukuba awunakuze ufune, kwaye uthembele apha akukho nto - akuyithandi yinyaniso. Emva kwakho konke, ngaphandle kokuthembela yonke into iqala, umntu okhethiweyo kufuneka abe ngumntu oya kuhamba kunye naye ebomini bakho, akuxhase kwaye akuncede, akunike icebiso aze akuthande ngokuba ungubani. Emva koko, oku kungenye yeendawo zakhe eziphambili, kwaye oku kubonisa isimo sakhe sengqondo kuwe. Ukuba ungamthembi, oko kwenzeka njani konke oku?
Yaye isahlulo sesihlanu, uphawu lokugqibela kukuba akukho ukungabaza. Lapha, umphefumlo wakho nengqondo yakho kuya kukunceda, indlela oziva ngayo ukhethiweyo wakho, ngaphandle kokuthembela kwiimpawu ezi-5 zokwenene, uthando olunyanisekileyo. Ukuba awuqinisekanga ngokuqinisekileyo ukuba nguyena oyifunayo ubomi bakho bonke, ukuba ukhangele nabanye abantu, okanye uceba uze uphuphe ngomnye umntu, iimvakalelo zakho azikwazi ukubizwa ngokuba yintando yonyani. Ukuba awuqinisekanga ukuba lo luthando kwaye lo ngumntu wakho-ngoko, kufanelekile, kufuneka uphendule de ube ugqibelele kuyo kwaye unokuthi ngokuqinisekileyo: "Ewe, nguye, lo ngumntu , endiyifunayo yonke yobomi bam. Ndifuna ukuba abe nguyise wabantwana bam aze eze kum ubomi. Ndiyamkela ngokupheleleyo njengoko ekhona kwaye wabelane ngemibono yakhe. Ndiqinisekile ukuba, kwaye yinto eyona nto. "
Ukwahlukana phakathi kwabantwana kubantu abadala
Indlela yokusebenzisa i-yoga
Izindlela zokunyamekela ubuhle besifazana
Iimbali zonyaka omtsha zamazwe ahlukeneyo
Ukunyamekela izipikili ezinobumba kunye neMawala